Madaxwaynaha iyo Raiisulwasaaraha oo gooni gooni ula kulmay Xildhibaanadda Beesha Absame, Maxaa ka soo baxay,? – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Sep 10, 2017
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa xalay kulan saacado badan qaatay la yeeshay Xildhibaanada Golaha shacabka ee ka soo jeeda Beesha Absame.
Warar lagu kalsoonaan karo oo ay heleyso HornAfrik ayaa sheegaya in kulankan uu ku dhamaaday faham waa, iyadoo qaar ka mid ah Xildhibaanada ay soo jeediyeen in arrintan ay u taalo Baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa dhageystay talooyinka iyo aragtida Xildhibaanada, isgoo weydiinayay xalka meesha uu ku jiro.
Sidoo kale Xildhibaanada ayaa shuruudo adag hor-dhigay Madaxda dowladda, sida in laga laabto qodobo ka mid ah go’aanadii Golaha Wasiirada oo ay sheegeen inuu yahay mid Soomaali kala geynaya.
Mid ka mid ah Xildhibaanadii kulanka ka qeyb qaatay oo diiday in magaciisa la xigto ayaa u sheegay HornAfrik in Madaxweynaha ay la wadaageen dareenkooda, isagoo xusay in arrintan ay tahay mid u taalo shacabka iyo Baarlamaanka.
Xildhibaanada Beesha Absame ayaa aad uga careysan go’aankii Xukuumadda qaadatay, iyagoo diiday xal ka gaarista arrintan iyo inay xiisada dejiyaan.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu la soo xiriiray Xildhibaanada, si arrintan xal looga gaaro, loona dhameeyo. balse way ku gacan sayreen dalabka Axmad Madoobe.
Dhinaca kale Xildhibaanadan ayaa shalay gelinkii dambe la kulmay Ra’iisul Wasaaraha, waxaana kulankooda uu ku dhamaaday is afgaran waa.
Madaxtooyada iyo Xukuumadda ayaa dadaal ugu jira inay xiisada dejiyaan, isla markaana Xildhibaanada ku qanciyaan go’aankii Golaha Wasiirada, lamana oga sida xaal noqon doono,
Si kastaba ha ahaatee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu go’aan ka gaaro go’aankii Xukuumadda ka qaadatay dhiibidii C/kariin Qalbi Dhagax, maalinta berri ayay wararku sheegayaan in mar kale kulmi doonaan, kaddib markii kulankii shalay uu kooram la’aan u baaqday.
Faahfaahin dheeriya oo ka soo baxaysa Qarixii ka dhacay Baladwayne.